Diarin’i sipagasy » Inona no andrasana?
maintikely :: Oktobra 22nd, 2008 7:19 pm
re sipagasy raha izany
aza miandriandry aza fa dia alefaso ny post marobe hovakianay :))
sipagasy :: Oktobra 22nd, 2008 9:45 pm
misaotra mampahery hihihihi
mpandalo :: Novambra 10th, 2008 12:30 pm
Raha tsy mahadiso , saika mba hanontany aho hoe inona marina moa no tanjona kendrena amin’ny fanoratsoratana toy izao?
sipagasy :: Novambra 30th, 2008 6:18 pm
ny tanjoko aloha dia ny mba handrakitra ny fiainako ho hitan’ny fara sy dimbiko e!
mpandalo :: Desambra 2nd, 2008 9:19 pm
»handrakitra ny fiainako ho hitan’ny fara sy dimbiko e!«
Raha izany no izy dia tena ilaina ve ny hanaovana an’izany ampahibemaso?
Diarim-pianakaviana ve no kendrenao sa kosa te-hampita ny traikefanao manokana ho an’ny be sy ny maro ianao?
sipagasy :: Desambra 7th, 2008 3:29 pm
Mpandalo, ao anatiny daholo izany rehetra izany kann, eto ihany koa mantsy no ametrahako izay mba tiako ho zaraina amin’izy ireo any aoriana any, mety ho fijeriko manokana toe-javatra mitranga @ izay vanim-potoana izay, na zavatra tiako raiketina fotsiny e!
mpandalo :: Desambra 9th, 2008 1:53 pm
Mba azonao lazaina ve hoe inona no mba andrasanao amin1izao krismasy sy ny taona vaovaoa ho avy izao?
sipagasy :: Desambra 10th, 2008 3:05 pm
Ry mpandalo, tanjona inona moa hihihihih amiko tsy misy izay maha samihafa ny andro noely @ andavan’andro. hihihihihihi. andro ho an’ny ankizy io sy ho an’ny mpino ihany koa……..ny taona vao² euuhhh ny isa 8 miova ho 9 veh hhihih tsy misy mahasamihafa azy, fa misaotra ny Avo fotsiny aho mbola omeny ora sy minitra iainako isan’andro….. ary ny anao ry mpandalo mba inona kosa???
mpandalo :: Desambra 12th, 2008 11:50 am
Inona no andrasako ?
Ireo zavatra natao ka nety tamin’ny 2008 dia hatsaraina , ny tsy nety amboarina na ariana.Fomba fijery ,fomba fanao zavatra…
Ny vavaka atao amin’Andriamanitra dia ny hanomezany herim-po , herintsaina enti-misedra izao fiovana be misy amin’ny fianana izao.
Voavakiko tany ho any fa nianatra tao Sainte Chantal i sipagasy .Tsy lavitra teny aho no nipetraka …taona maro lasa izay.Tiako be ilay fahanginana teny.
Tablier mavo kely no fanaon’ny mpianatra tamin’izany.
sipagasy :: Desambra 22nd, 2008 3:47 pm
mmhh efa tsy tablier mavokely intsony ny teny t@ izahay tonga teny kann, efa lobaka fotsy sy zipo mainty rehefa alatsinainy, mampiaka-tsaina ary andavan’andro kosa dia tablier manga.
Ka amiko ry mpandalo, ny mba hoe andrasako koa @izoa lazainao fa andro fety izao dia ny mba hisian’ny fandriampahalemana enran-tany annn, ary indrindra any à ilay tany nihaviako!!!! fa asa misy inona loatra fa mirehitra hono izao ao ilay hotel lehibe 5 étoiles handraisana ny fivoriam-be afrikana @ 2010 kouhh!!! asa inona daholo no ambadik’izany???? asa hanao ahoana ny TGV sy ny asa politika rehetra any an-toerana any fa toa tsy manjaka intsony ny fahafaha-miteny???????
mpandalo :: Desambra 22nd, 2008 4:20 pm
Tsy ny any amintsika ihany no mampanahy fa toa mandalo fotoan-tsarotra daholo ny firenena rehetra , ny toekarena no tena mibahana ny filazam-baovao sy ny haino aman-jery.Asa laotra fa dia hitomob be ireo tsy an’asa amin’ny taona ho avy.Jereo tsara ny zava-mitranga any Grece fa mety hiparitaka io raha ela loatra ilay recession.
Hay ve maharaka tsara ny vaovao avy any an-tanindrazana i sipagasy .Indrisy fa isika malagasy dia bokan’ny trosa ,bokan’ny politika ,bokan’ny fitiavan-tena, bokan’ny tandrametaka ,bokan’ny ankosobolamena….sahobakaka miani-drindrina hoy ny fiteny izay, ny faniriana betsaka fa ny hery no tsy maharaka.
Marina ny voalazanao fa fotoana hivavahana ho an’ilay tanindrazantsika izao.